Jabuuti oo ka hadashay sheegashadii Alshabaab & halka baaritaanku u marayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Jabuuti oo ka hadashay sheegashadii Alshabaab & halka baaritaanku u marayo
Jabuuti – Mareeg.com: Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ka jawaabtay sheegashadii Alshabaab sheegteen iney ka dambeeyeen qaraxyadii Ismiidaaminta ahaa ee todobaadkan ka dhacay baar ku yaallada caasimadda dalkaas, kaasoo ajaanib farabadan ku sugnaayeen.
Wasiirrada arrimaha gudaha, Xasan Cumar Maxamed iyo diinta Aadam Xasan Aadam Jamhuuriyadda Jabuuti oo jawaabay sheegashadii Alshabaab ayaa sheegay in arrintaasi muujineyso cadowtooya Alshabaab u qabaan cid kasta uu gacan u fidineysa umadda Soomaaliyeed.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha debadda Jabuuti, ahna afhayeenka xukuumadda Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in baaritaanka qaraxaasi marayo meel wanaagsan, islamarkaana la ogaaday halka ay kazoo jeedaan dadkii is qarxiyey, inkastoo uu ka gaabsaday inuu dal magacaabo.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dalalka Mareykanka iyo Faransiiska ay Jabuuti ka gacan siinayaan baaritaanka lagu hayo qaraxyada ka dhacay barkii La Chaumiere.
Wuxuu sheegay Maxamuud Cali Yuusuf in la adkeeyey amaanka garoonka diyaaradaha Jabuuti iyo xaduudka dalkaas oo dhan.
Labo qarax oo ay fuliyeen nin iyo naag oo todobaadkaan ka dhacay caasimadda Jabuuti ayaa dowladda dalkaas sheegtay in dhimashadu tahay labada is qarxiyey iyo qof shaqaale baarka ka ahaa oo u dhashay Turkiga.
Qaraxyadaas waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ku dhawaad 20 ruux oo intooda badan kazoo kala jeeday dalalka Midowga Yurub.